Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Hiakatra izany ny vidin-tsolika !
Inty sy Nday : Hiakatra izany ny vidin-tsolika !
Misafotofoto be mihitsy ity tontolon’ny vidin-tsolika eto amintsika ity. Efa ampolon-taonany no nambara fa “ampiharina ny vidiny tena izy” na “vérité de prix”. Tsy hoe maniry an’izany anefa akory fa hatramin’izao dia tsy hita ny tena fandehany. Ny mpitondra tsy manaiky hampihatra vahaolana mahomby.
Nisy koa ny fotoana izay nanelanelanan’ny fitondram-panjakana ny tsy tokony hampiakarana ny vidin’izy io ho an’ny mpanjifa eto an-toerana na ohatrinona sandan’izany eo amin’ny tsena iraisampirenena na ohatrinona.
Tsikaritry ny maro koa anefa fa nisy ny fotoana nidinan’ny vidin-tsolika teo amin’ny tsena iraisampirenena hatrany amin’ny 20 na 18 dolara ny barila. Ny vidiny ho an’ny mpanjifa teto an-toerana anefa dia tsy nidina fa voatazona ny vidiny talohan’izay.
Ankoatra io, nisy ny tsy maintsy nandrotsahan’ny fitondram-panjakana volabe (an’aliny tapitrisa ariary / 50 Miliara tany ho any) izay nambara fa ho takalon’ny tsy nanondrotana ny vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa.
Tetsy andanin’izany, tsy nety nandrotsaka ny haba nitatao tamin’ny vidin-tsolika tao amin’ny kitapom-panjakana malagasy mba hiantohana ny fikojakojana ny lalana (taxe sur les produits petroliers) ireo mpandraharahan-tsolika eto. Ny antony hono, dia hoe tsy mbola nandrotsaka ny vola fanampiana (subvention) tamin-dry zareo, ho takalon’ny tsy nampiakarana ny vidin-tsolika eto ny fanjakana.
Ny mpampindram-bola iraisampirenena toy ny Tahirim-bola iraisampirenena (FMI) anefa dia naneho hatrany ny tsy fankasitrahany ny famoaham-bola ao amin’ny kitapom-panjakana ho fanampiana ny vidin-tsolika (subvention). Io moa ilay hoe “fampiharana ny vidin-tsolika tena izy” (vérité de prix).
Ny tsy azo ikombonam-bava koa dia ity fandraharahana solika eto ity no isan’ny isehoan’ny kolikoly avo lenta eto. Tsy fantatra ara-pahamarinana izay tena fatra na hadirin’ny solika lafo mba hanaovana ny asa-marika na kajy hisintonana ny haba avy amin’ny solika (Tpp) hoenti-mikojakoja ny lalana. Tsy mahagaga raha tsy vita ara-potoana sy ara-dalàna ny fikojakojana ny lalana eto. Isehoan’ny kolikoly avo lenta io satria itsikombakomban’ireo mpandraharahan-tsolika sy ny tompon’andraiki-panjakana ambony any ho any ny fanambarana ny hadirin’ny solika lany na lafo. Izany hoe ahena araka izay tratra, mba ho kely dia kely ny haba arotsak’izy ireo ao amin’ny kitapom-panjakana.
Eo anatrehan’izany rehetra izany, miseho lany amin’izao fotoana ny fidangan’ny vidin-tsolika, izay efa mananika ny 80 Dolara ny barila iray. Mila mitandrina izany ny mpitondra fanjakana mba hisorohana ny fipoahana ara-tsosialy ka tsy hilingilingy hampihatra ny fiakatry ny vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa eto.
Ny fahasahiranana navelan’ny coronavirus efa mila tsy ho zaka. Zara aza mba misy rivotra kely iainana, dia hodarohan’ny fiakatry ny vidin-tsolika indray ve? Ny vola miditra amin’ny isam-batan’olona, efa ambilo-bazana. Ny fihariana ankapobeny tsy mbola mihodina araka ny tokony ho izy, na ny talohan’ny Covid aza, nefa ny fisondro-bidim-piainana ity, manambana amin’ny alalan’ny ho fiakatry ny vidin-tsolika.